टेकु अस्पतालले कोरोना उपचारका लागि धरौटी नलिने « Rara Pati
टेकु अस्पतालले कोरोना उपचारका लागि धरौटी नलिने
१७ कार्तिक, काठमाडौं । टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का बिरामीलाई उपचारका लागि धरौटी रकम नलिने भएको छ ।
अस्पतालका निर्देशक डा. सागरराज भण्डारीले धरौटी रकम सम्बन्धी पूर्व सूचनालाई स्पष्ट पार्दै कोभिड–१९ का बिरामीलाई उपचार गर्दा बुझाउनुपर्ने धरौटी रकम नलिन शैया र काउण्डरमा पत्राचार गरिएको बताए ।
यसअघि अस्पतालले कोभिड–१९ का बिरामीलाई उपचार गर्दा रु २० देखि ५० हजारसम्म धरौटी राख्नुपर्ने बताएको थियो । अस्पतालले स्वास्थ्य तथा जनसङख्या मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार नै शुल्क तिर्न सक्ने बिरामीले शुल्क तिर्ने र नसक्ने बिरामीले निःशुल्क उपचार गर्ने नीति लिइएको उल्लेख गरेको छ ।
निर्देशक भण्डारीले अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीका लागि खाना, औषधि तथा प्रयोगशाला र अन्य उपलब्ध परीक्षणहरु निःशुल्क रूपमा व्यवस्था गरिँदै आएको समेत जानकारी गराएका छन् ।
सरकारले विपन्न, अशक्त, असहाय, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीका मात्र निःशुल्क परीक्षण र उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णय यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
अस्पतालका निर्देशक डा. भण्डारीले विनाशुल्क कोभिड–१९ का सङ्क्रमितको उपचार नै नगरिने भन्ने दुष्प्रचार र भ्रमबाट मुक्त हुन आग्रह गरेका छन् । आवश्यक परेका बेला अस्पतालले निःशुल्क रूपमा सङ्क्रमितको उपचार गर्ने समेत उनले बताए ।
कञ्चनपुरमा प्रहरीको गोली लागेर लागुऔषध कारोबारीको मृत्यु
प्रहरीका अनुसार अन्य ३ जना तस्कर भने फरार भएका छन् । उनीहरुको साथबाट लागुऔषध र
विप्लवमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा, नेता कार्यकर्ता छाड्न गृहको निर्देशन
सरकार र विप्लव समूहबीच बिहीबार तीन बुँदे सहमति भएसँगै गृह मन्त्रालयले हिरासतमा रहेका विप्लव समूहका